Openbucks Game Card $15 USD ~ ICT.com.mm
HomeOpenbucks Game Card $15 USD
Openbucks Game Card $15 USD
Buy oBucks Card USD5 now to enjoy using in over 500+ games. OpenBucks (Global) was founded in 2010 and is an Internet payment company based in Silicon Valley, CA, which allows people... [Learn more]
Brand: OpenbucksFilter by: Gaming Gift Cards, pcmm
Buy oBucks Card USD5 now to enjoy using in over 500+ games. OpenBucks (Global) was founded in 2010 and is an Internet payment company based in Silicon Valley, CA, which allows people to pay online using gift cards from major retailers.
ဂိမ်းအမျိုးအစားပေါင်း 500 ကျော်မှာ ငွေပေးချေဖို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Openbucks Game ကတ် (USD $15 တန်) ဖြစ်ပါတယ်။ ဂိမ်းတွေအတွက်သာမက Ecommerce ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ငွေပေးချေဖို့အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
[oBucks ကတ် အသုံးပြုနည်း]
1. မိမိကစားနေသည့် ဂိမ်း၏ “Checkout” ကို သွားပါ။
2. “Pay with Gift Cards” ခလုတ်ကို ရှာပါ။ (“more options” ဆိုသည့်အောက်တွင် ဖော်ပြထားတတ်ပါသည်)
3. “Pay with Gift Cards” ကိုနှိပ်ပြီး “oBucks Card” ကိုနှိပ်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ပေးလိုက်ပါ။